Izincwadi Zasehlobo: Amahemuhemu Okuvuvukala, ngu-Yukio Mishima | Izincwadi Zamanje
Kusuka ngaphakathi eSpain engibhekene nakho ngo-Agasti onzima namuhla esiya ezincwadini eziyindida zaseJapan, okufanayo nokuthi ababhali abanjengoBanana Yoshimoto noma uHaruki Murakami, ukubala izibonelo ezimbalwa nje, sebephenduke uhlobo lwayo uqobo; icashile njengoba ibucayi futhi ivusa inkanuko. Lesi sikhathi sikhulu U-Yukio Mishima ngomsebenzi wakhe Amahemuhemu e-surf osithuthela esiqhingini esikude saseJapan ukuyofakaza indaba yentsha esencane ebhajwe phakathi kwamawa, amagagasi namadolobha lapho ugesi ungafiki khona.
Izincwadi ezintsha zokubhekana no-Agasti.
Ikhona lokugcina laseMpumalanga
Ngaphezu kwezinhlamvu uqobo, isiqhingi sase-Utajima, etholakala ogwini lwaseNagasaki Prefecture, eningizimu yeJapan futhi evulekele olwandle iPacific Ocean, ingumlingisi ophambili weRumor of the Swell. Lesi siqhingi, esathengwa eminyakeni embalwa eyedlule ngumbhali ongumculi nombhali wezingoma waseJapan uMasashi Sadha, kumele ngabe, okungenani kwaze kwaba yisikhathi lapho uMishima ashicilela khona le ncwadi (1954), ipharadesi eliyi-hermetic, elalihlala kuphela indlu yesibani ephethwe umbhangqwana oshadile, ithempeli lamaShinto kanye nedolobhana elincane lokudoba.
Indawo eyimfihlo lapho yenzeka khona Indaba yothando evuthayo phakathi kukaShinji, umdobi osemncane othobekile noHatsue, indodakazi yomuntu ocebile. Abalingisi ababili abonakaliswe yimimoya enokuthula, abakhosela ngaphansi kwezihlahla zikaphayini phakathi nesiphepho futhi bagweme ukungahleleki okuvele edolobheni elibuyela emuva, okuphawuleka ngokwehlukana kwezigaba.
Ngobuqili obukhulu, uMishima ubeka indaba elula (futhi enobungozi) yothando phakathi kwabantu abasha ababili abavulekayo, kancane, njengembali ye-cherry, kwezothando nasebusheni endaweni ephawulwe yi-conservatism, kodwa futhi nemvelo evuswe abambalwa nguMishima , umthandi we-bucolismo naye obonakalise emisebenzini yakhe eminingi.
U-Yukio Mishima: ababhali abangaqondi kahle
Isithombe: I-Japan Times
Ngaphandle kokulula okuvezwe ngu-El rumor del oleaje, umbhali wayo, U-Yukio Mishima, kungenzeka ukuthi ungomunye wababhali abanzima kakhulu bekhulu lama-XNUMX.
Wazalelwa eTokyo ngo-1925, uMishima wayeyinzalo yomndeni ohlobene nama-Samurai, engugogo wakhe, owesifazane onenkinga yengqondo nomthengi wezincwadi ngezilimi zase-Europe, umuntu ophambili ebuntwaneni bakhe futhi engenye yezinsiza ezisetshenziswa kakhulu impilo yakhe.isiza sokwakha. Ngokukhula, ukwenqaba kwamasosha ukungena njengomshayeli wendiza phakathi neMpi Yezwe II ngenxa yesifo sofuba kuzodala ukukhathazeka okukhulu eMishima ukuthi uthathe isinqumo sokunciphisa ukuvivinya umzimba (izifinyezo zakhe ezidumile ezithathwe eminyakeni yama-50s ziyizibonelo ezithile) kanye nezincwadi.
Uthathwa njengomlobi oholayo waseJapan wasemva kwempi, UMishima ubhale amanoveli angama-40, imidlalo engu-18, izincwadi zezindaba ezimfishane ezingama-20, nezinye izindatshana ezingama-20.. Emisebenzini yakhe, edume kunazo zonke Itilosi elahlekelwe umusa wolwandle, Ukuvuma kwesifihla-buso, Amahemuhemu wamagagasi, kanye ne-tetralogy Ulwandle lwenzalo, oluqukethe iziqu zeSnow of spring, Runaway horses, Ithempeli lokusa nokonakala kwengelosi. Imisebenzi yesitayela esithile lapho uMishima ethatha khona ithuba lokuhlanza umbono wakhe wezwe angakaze angene kulo.
Umhambi ovelele futhi oqokelwe iziqu kathathu kaNobel (kukholakala ukuthi akazange aphumelele ngenxa yemibono yakhe yangakwesokudla), umbhali waba yimfihlakalo kuye, wamukelwa yi-conservatism eyambopha futhi yamkhathaza ngokufanayo.
UMishima ushone ngo-1970 enza isibopho se- ikuku, ukuzibulala okungokwesiko kwamagugu ama-Samurai akhuthazwa yiTatenokai, umbutho wamasosha owavikela izindinganiso zakudala zesizwe saseJapan, ngokunqunywa ikhanda. UMishima wahlela ukufa kwakhe iminyaka emine futhi wathumela isihloko sokugcina soLwandle Lokuzala kumshicileli wakhe ngaphambi kokwenza isinqumo sokugcina.
Yize imisebenzi ethile ingahle ingafaneleki kakhulu lapho ungena endaweni yonke yaseMishima, Amahemuhemu e-surf Yincwadi elula nenhle ongaqala ngayo. Umsebenzi okuvumela ukuthi uye esiqhingini esikude samalangabi olwandle kanye namahlathi kaphayini azungeze amathempeli wedwa, kepha futhi nokulahleka phakathi kwamasiko esiqhingi sendawo lapho imvelo ingumakhelwane oyedwa, lapho ubuchwepheshe, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini kanye nokuphithizela "impucuko" ngamahemuhemu nje akude.
Kukhona okufundile kwaMishima?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izincwadi zehlobo: Amahemuhemu weSurf, ngu-Yukio Mishima